အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိ RecifePernambucoနှင့်ချက်တင်ချက်တင်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။ သင်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ရည်းစားအတွက် Recife နှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်စကားပြောနှင့်စာပေးစာများ၊အကောင့်အသစ်များနှင့်။ အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ၊လူအသီးအသီးမှာကြည့်၊အိပ်ထဲသို့ဝင်သောအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိ RecifePernambucoနှင့်ဆက်သွယ်စကားပြောနှင့်ရပ်ရွာမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။
ငါအသက်ရှင်ပြီးအလုပ်ကိုနေ့တိုင်း။ တခါတရံငါအားလပ်ရက်အပေါ်သွား။ ဒါဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့စက်ဝိုင်းနှင့်၊သို့သော်ဤသည်အစိတ်အပိုင်းများကြောင့်၊အကယ်။ သားသားအရွယ်ရောက်ပြီးအလွန်အလေးအနက်၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူအမာသဘောဟာသ၊လူသာအဓိက။ မြင့်မားတဲ့ပညာတတ်၊ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်အတူအမူသို့ဦးတည်မိန္းကေလး;-)။ ဖော်ရွေမှု၊တိတ်ဆိတ်သော၊ခိုင်မာသော၊ကြမ်းတမ်းသော၊ရိုးသားသော၊ရင်းမှန်နဲ့၊ငါမသောက်ပါနဲ့၊မခိုးနှင့်အတူငါ့လက်ကိုသင်လိုအပ်ဘယ်မှာအရာ၏တစ်သဘောမျိုးဟာသ၊နေရာမရှိ၊ဘုရားသခင်နှင့်အတူဒါပေမယ့်ငါ့ဦးခေါင်း။ ဇာတ်ကောင်:အေးဆေးတည်ငြိမ်၊တည်ငြိမ်၊ဖော်ရွေ။ အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်။ ကျနော်တို့ဖွင့်ကိုသာအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အတွက်တစ်ဦးမိသားစုစတင်။ ငါဖြစ်၏တည်ငြိမ်တဲ့အပေါ်လမ္း။
အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မိန်းကလေးငယ်များ၊လူများထံမှသင့်ရဲ့ဧရိယာကစား၊သိလူအသီးအသီးအခြား။ အခြားချိန်းတွေ့လီေလိုအပ်တဲ့ကြေးပေးသွင်းပေးဆောင်ဖို့အားလုံးဖစ္ပါတယ္။"ချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများ"ဒီဖြစ်ပျက်ပါဘူး။ အဲတစ်ဦးတည်းသာအမျိုးအစား၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ ထိုသို့အခမဲ့အဘို့။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ချိန်းတွေ့၊နယူးတစ်ခုတည်းကလူတွေနှင့်ကစားအတွက်အသင့်ရဲ့ဇုန္စကားပြောနှင့်ရောနှင့်တွေ့ရှ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်အတွက်စကားပြောခန်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျ? အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့တိုက်ရိုက်ချက်တင်ရော။ မဟုတ်ပဲတစ်ဦးတစ်။ ပူးပေါင်းဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအသိုင်းအလွန်လူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဧရိယာ။ မွ်ေစကားပြောဝင်းဒိုးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်လူတို့အတွက်စစ်မှန်သောအချိန်။ ပေးပို့သို့မဟုတ်ချိန်း။ သင်သည်လည်းရွေးချယ်စရာရှိသည်များကိုပိတ်ဆို့ရန်။ ချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများသည်အရပ်လူစားနဲ့ရောရပ်တန့်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူး၊သင်သည်အဘယ်မှာရှိ။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အသင့်ရဲ့ဇုန်နှင့်လာႏုိင္ပါသည္။ ဌာနမှူးနှင့်တွေ့ဆုံသူ၏ဓားနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စကားများနေ့အကြောင်းဖော်ပြရန်အတြက္၊သင်အကူအညီဖြစ်စေထိုအပလီေပိုမိုပွင့်လင်းဖို့အခြားအသုံးပြုသူများ။
လူအဘယ်သူသည်ပစ်မှတ် heterosexuals မဒီဇိမ်ခံအ:ဖြည့်ဆည်းလွတ်လပ်လပ်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်၊မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အတူ၊မည်သူမဆိုလျှင်ပင်၊သင်ဖို့အသုံးပြုအရာကိုမသိဘဲမမေးခွန်းများကိုများမှာ:သင့်ရဲ့ငါးမိနစ်။ သတင်းအချက်အလက်အပေါ်ဆိုက်၏အမှုလေ့လာမှု၏အလိင်တူချစ်သူအသိုင်း၏ကိုယ္စားလူတိုင်းနှင့်အရာအားလုံးမှာအကောင်းဆုံး၊"လိင်ဒါ"အကျင့်ကိုကျင့်မှန်ကန်စွာ၊မှာအဆိုးဆုံး-နိုင်ပါတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ရုန်းကန်မပေးပါဘူးကြောင့်အမျက်ထွက်ရမှာကျပန်းင့္ပဲ။ ဖြည့်စွက်ကာ၊များသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူအောင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်၌တွေ့၏မြို့မ-ရိုးရာနစ္။ သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်။ အင်တာနက်ကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဝေးသွား။ ေလိင္တူႏွစ္သက္သူေ၊အများအပြားရှိပါတယ်အလိုက်အရင်းအမြစ်များနှင့်ဖိုရမ်များ(ရုရှားလိုနဲ့ဗမာ)အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အင်တာနက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ။ စာပေးစာယူနှင့်မိန်းကလေးများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ငါအထီးကျန်ခံစားရ၊အထူးသဖြင့်ကတည်းကလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်မည်သူ။ အများပြည်သူလူမှုရေးကွန်ယက်လည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြီးချင်သူလူများအပစ်အပရိုဖိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများသောမြင်ကွင်းကိုခံစားကြည့်ပါရဲ့ တိကျတဲ့မြို့အဘို့အအတော်လေးသေးငယ်။ ရမှတ်နှင့်မေးခွန်းလွှာများမှာများသောအားဖြင့်ပိတ်၊ထို့နောက်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဖော်၊ကောင်းမြတ်သောအရာသည်များစွာသောလူတို့အဘို့သာဂရုစိုက်။ သင်ဆိုရင်နိုင်ငံသား၊စိတ်ထဲမှာစောင့်ရှောက်။ ခေတ်သစ်လူမှုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှတဆင့်အသိုင်းအဝိုင်း၊အများပြည်သူသို့မဟုတ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကြေးနန်းချန်နယ်။ အကောင်းဆုံးအလိင်တူချစ်သူများအတွက်ဖျော်ဖြေအလားတူမေးခွန်းအမှမြို့နှင့်အတူ၊အမျိုးမျိုးသောချန်နယ်၊telegrams အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကပ်လျက်သူများကိုမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာ-အခမဲ့။ ဒီမလိုတဲ့ပို့စ်စရိတ်တစ်ပြား(၅၀ ရူ)၊ဒါကြောင့်လုပ်။ သင်တန်း၏၊ပိုကောင်းဖို့ရှိသူတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်မမြင်နိုင်အတွက်အခွင့်အသင်ဖွင့်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ဆင်တူ Kina ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဤတစ်မျှမျှတတဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အဆင်ပြေဘို့အရွေးချင်သောသူတို့သူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်ညဉ့်သုံးဖြုန်းနှင့်အတူတစ်ဦးကအလွန်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးသည်။ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအများဆုံး၏မိန်းကလေးများ။ များသောအားဖြင့်လိင်တူချစ်သူအခွင့်အပူးပေါင်းနိုင်ခြင်း ဖွင့်စာရင်းကိုဒါကြောင့်သင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်၊သင်မူကားလည်းသွားတဲ့ခြေလှမ်းနောက်ထပ်ရေးပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားဖို့အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုနှင့်မိန်းကလေးများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖန်တီးရန်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှု။ ဒီအကျွမ်းလိမ့်မည်ရှားပါးစာပေးစာများ၊အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်အရာသည်ထင်ရှား၏တန်ဖိုးကိုဘာသာပြန်ဆိုဒီအကျွမ်းနိုင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်ဖို့ကပိုပြီးမှန်ကန်၏။ အများစုဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးအမြို့မြို့ရှိအနည်းဆုံးတစ်ဦးလိင်နိုက်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမနေပါစေမည်သို့ဆက်ဆံသင်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးင်၊ပထမဦးဆုံးကြိုးစားအတွက်လူတစ်ဦးမှာစားသောက်ဆိုင်အပေါ်တစ်ဦးကြိုးရုပ်သံလိုင်းအတွက်သို့မဟုတ်အနီး၏။ ဤအချိန်အတောအလုံးကိုလိင်တူချစ်လူအစုအဝေးကြီးကနေစနေနေ့ညအထိတနင်္ဂနွေဆိုရင်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကြောက်မဟုတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိစိတ်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝလုံခြုံအာကာသမှအရာအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ရေမှတ်ရှိပါတယ်။ အကလပ်များသောအားဖြင့်အထွက်ယူသွားတတ်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်စောင့်အကြပ်သူသမုတ်သောအမည်။ အခုလတ်ပြတိုက်၊ထိုနှစ်သိမ့်မှုထမ်းကိုထိန်းချုပ်သောသူဧည့်သည်'အမိန့်အနိမ့်အတွက်အားလုံးဒေသများနှင့် တုတ်မှဖွင့်အဘယျသို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအရာတစုံတခု၏အစွမ်းသတ္တိကိုအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအသိအကျွမ်းနှင့်အစဉ်အမြဲအအေးဆေးလေထု၏တစ်ဦး"အေး"ပါတီ၊ဘားသို့မဟုတ်ကခုန်ကြမ်းပြင်။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီအမှတဆင့်အများပြည်သူအေဂျင်စီများကဲ့သို့ Instagram နှင့်တွစ်တာ။ အများအားဖြင့်၊ဤသည်အသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးသင်အတူချိတ်ဆက်နေသောသူတို့ဂရုစိုက်သူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုး၊နှင့်ပုံမှန်လိင်ကလပ်အသင်းများမှာမငဲ့၊အရာကိုလည်းဆက်စပ်။ သို့သော်၊တဦးတည်း၏ညဥ့်ကလပ်အတွက်မ-ရိုးရာလူတဘယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရပ်များအမြဲနေရာယူ:အုိေကညအပေါ်အဓိက၊ပါတီနှင့်အတူ perversions နှင့်ခုန်။ ဒီမကြီးအမှုအတွက်သာမန်ကလပ်အသင်း။ အများအပြားရှိပါတယ်ပုံစံဖြစ်ရပ်များတွင်ကျင်းပကြီးမြို့၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကအမြဲမနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပျက်။ "ဆန့်ကျင်-ကဖီး"အမ်ဳိးလည်းအချိန်အခါလူလိုသူပေးဆောင်နိုင်သေးပျော်စရာရှိသည်:အရသာရှိလက်ဖက်ရည်၊ဘုတ်အဖွဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်င့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ခံမရှိဘဲအတားအဆီးတစ်ခုမှဆက်သွယ်ရေး။ အားလုံးစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်၊ဤသည်အဓိကအရာအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ: သင်ရနိုင်တဲ့ဗီဇာနေထိုင်ရန်အတွက်လိင်တူချစ်တက္ၾ'ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အဖျော်ယမကာ။ ဲ-"အမတ်အသိုင်း"၊မြို့ကြီးများအတွက်-တိုင်းကြီး။ ထို့ကြောင့်၊အတူရောက်လာတဲ့သူတွေ၊သူတို့အထောက်အကူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတူကွဲပြားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူလူတွေကအလားတူပန်းတိုင်။ အများအားဖြင့်၊လိင်တူချစ်စိုးရဆီသို့ဦးတည်ရွှေ့ပြန့်ပွားအနက်အချက်အလက်တိုက်ခိုက်ရေးဤပြဿနာကို၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာနှိမ်နင်းဖို့အန္တရာယ်တြျဖစ္ျပီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေတဲ့၏ထင်မြင်ယူဆလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ငါတို့သည်လည်းလိုအပ်၏အကူအညီ၊အတတ်နိုင်ဆုံး၊၏ပုံစံအတွက်စေ့စပ်ဆွေးနွေး၊ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်များအတွက်အသစ်ပညာရှင်နှင့်"ကိုယ်ပိုင်"။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်၊သေးငယ်တဲ့လူ့အရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်းကလက်ခံအသစ်၊နိုင်ငံရေးထဲသို့၎င်း၏ရာထူး။ အဖြစ်တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊လူအတွန်းအကြံပြုချက်များ၊လျှို့ဝှက်ချက်မေးခွန်းများကို၊နှင့်အသစ်အသစ်တွေအတွက်၊ပင်ရယ်စရာ။ တစ်ခါတစ်ရံမျှမရှိပိုကောင်းသွန်။ နေတယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်မိတ်ဆွေများအတွက်စက်ဝိုင်း၏အသိအကျွမ်းတဲ့သူမဟုတ်ကြဘူးကြောင်းပြောမှာညဉ့်၊ထိုအခါသင်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ။ သင်သာသူ သင်သည်လည်းအနည်းငယ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ မိတ်ဆွေများအားဖြင့်အချိန်ပင်၊မကောင်းတဲ့အစာပေးစာယူ။ ဤသည်နှစ်ဆအမိန့်သာအရာနှင့်တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးမှရှောင်ရှားရန်။ ငြင်းပယ်မှလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်များဂရုတစိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်သောသူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်သင့်အုပ်စု၊နားလည်ပြီးလက်ခံပါတယ်၊အစားထက်အပြစ်နှင့်လက်ခံရရှိချိန်တည်းမှာ။ အဲသည်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမကြောက်လန့်ဖြစ်၏။ "ရဲ"ဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်အတူပြုံးနှင့်ဖော်ရွေသောဆက်သွယ်ရေးပါဝင်သည့်အရာအားလုံးကို။ ကျေးဇူးပြုပြီးမသုံးပါနဲ့ပစ္စည်းဆြးေႏြးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊အဆိုအရအဆိုပါဥပဒေ၏အရုရွား၊အသုံးပြုသူသည်အသက် ၁၈။ သင်သေချာသင်နိုင်ပါတယ်။
ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအတွက် Polovinka Palencia။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများထည့်ပါ။ အသစ်အသိအကျွမ်းပူဇော်ဖို့နည်းလမ်းအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဆိုဒ်၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ဖုန်းနံပါတ်၊ကြေးဇူးအကောင်းဆုံးနှင့်ခွဲဝေအရင်းအမြစ်များ။ Polovinka ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့၊ဓါတ်ပုံမပါဘဲ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအရာဝတ္ထုမဟုတ်နိုင်နှင့်တွေ့ဆုံ။ ကောင်းတစ်ဦးကွန်ယက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းလျက်ရှိ၊အဘယ်မှာရှိမိန်းကလေးငယ်များခေါ်နိုင်ပါတယ် Palencia၊အွန်လိုင်းဆက်သွယ်၊မျှဝေင်းတို့၏ဓာတ်ပုံများ၊ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ Polovnki ၁၀၀ ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့(မွတ္ပံု)လူအပေါင်းတို့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သောဆိုက်၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်သင်တန်းသားများမှချိန်းတွေ့။ ယနေ့သင်သုံးနိုင်သည်"အကြိုက်ဆုံး"-ဤသည်၏ဖုန်းနံပါတ်မိန်းကလေးနဲ့ကောင်လေးအတွက်ဓာတ်ပုံခဲ့သောလည်းမည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ဤသည်၏အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအလေးအနက် နှင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊အထူးသဖြင့်အကြားလူကနေအီတလီကို။ အခမဲ့အီတလီစကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ဘာလင်၊ဟမ်းဘတ်၊ပဲ့ပြင်လော့၊မွှေး၊ဥေရာပ၊၊ဒေါ့၊၊ အပေါင်းတို့နှင့်ဂျာမန်မြို့။ ဂျာမန်ချိန်းတွေ့ဆိုက်တောင်းဆိုများအတွက်တစ်ဦးတစ်။ သာမိုးသည်းထန်စွာပရိုဖိုင်းနှင့်အရည်အသွေးအစည်းအဝေးရွေးချယ်ထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်လက်ခံမှသာအနက်ပရိုဖိုင်း၊ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေစဉ်သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်အချက်အလက်နှင့်အာမခံလိုအပ္သည္။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းသန်းပေါင်းများစွာ၏အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်လိုအပ်ဖြည့်ဆည်းရန်ညာဘက်။သွားသဖြင့်ဆိုက်၏လေထုမှာအချစ်၊နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပးႏုိင္ပါအားလုံးအပရိုဖိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လက်စွဲဓိစစ်ဆေးစီတွင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာစေရန်အဖွဲ့ဝင်များ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအဓိကအကြောင်းရင်းနှီး လူနေသောအစိတ်အပိုင်း၏အုပ်စုများတွင်ပါဝင်သူတို့သုတေသန။ ဖြစ်နိုင်ခြေအဤမျှလောက်ကြီးစွာသောရှိပါတယ်အစည်းအဝေးများအတွက်။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်အီတလီအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အစားပြင်ဆင်နေစုံတွဲနှင့်အောင်မြင်ဂၢမ်ား၏အကြီးအကြားမှာနှင့်။ သူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဘို့ထိပ်တန်းဦးစားပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့။ အားလုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်မပါဘဲသင့်ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်။ သင့်အပျက်လွယ်၊အ ကိရိယာအဘို့အသင့်ရှာဖွေမှု၊အကြှနျုပျတို့သညျရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ကိုလွအချိန်ကိုကယ်တင်။ ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ"ပို"မှအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာ။ ? လိပ်-အကြီးဆုံးအီတလီချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အီတလီချိန်းတွေ့ဖြစ်အများဆုံးအလေးအနက်၊ရိုးသားခြင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ -ကြိုးစားခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ထုတ်စစ်ဆေးသူတို့ရဲ့တည်ရှိသည်နှင့်ပြန်လာဖို့အစစ်အမှန်အီတလီချိန်းတွေ့လော။ ထိုတရုတ်အမူ၊နှု၏အပြုအမူမု၊သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကိုကယ်တင်နှင့်ဘယ်တော့မှမဆပ်ဖို့ကြိုးစား၊ပြီးတော့ချက်ချင်းခြင်းမရှိဘဲ၊အချိန်ဖြုန်းသည်၊သွားဖို့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အင်္ဂချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုစတင်အတကတ အီတလီမေတ္တာကိုချိန်းတွေ့ဇာတ်လမ်း:ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါပထမဦးဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ရိုးသားမှုနှင့်လူထုအတြက္ဦးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအကြားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်။ လောလောဆယ်၊ဂျာမနီသည်အကြီးဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ဘို့အတစ်ခုတည်းကလူ။ ဗမာ။ အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတူယခုလိုက်ဖက်သော။ အပေါ်မိမိတို့အမင်္ဂလာဆောင်နေ့။ ဗမာနိုင်ရုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤမင်္ဂလာဆောင်နှင့်ချိန်းတွေ့ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လူပျိုကြိမ်မြောက်လွယ်ကူသောဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်၊သင်အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုအရိုရှာအခြားအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သင်အွန်လိုင်း။ အီတလီချိန်းတွေ့နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်အစည်းအဝေးချက်ချင်းအမှတ်တံဆိပ်:အပေါင်းတို့နှင့်အခြားမြို့ရောမ၊မီလန်၊မြူးနစ်၊မွှေး၊ဥေရာပ၊၊ဒေါ့၊၊၊ဂျာမဏီ၊ဆက်လက်သွားရောက်ရန်ဒီဆိုဒ်ကိုလက်ခံကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအရာနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာ၊လူမှုကွန်ယက်အင်္ဂါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ယာဉ်အသွားအလာရဲ့။ ဤကွတ်ကီးများအတွက်လိုအပ်သောစစ်ဆင်ရေး၏"လိုအပ်သောအသိပညာဗမာအဘို့အချိန်းတွေ့"အဖြစ်အစီအစဉ်။ သင်သည်မကျင့်လျှင်၊ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြု။.
အစည်းအဝေးနှင့်အတူဂျာမန်ဘာသာမိသားစုစတင်။ ငါ ၄၆ အသက်အနှစ်။ ကြၽန္ေကွာရှင်းခြင်းနှင့်ငါချင်တစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုစတင်ရန်။ ကျွန်မအလုပ်ကြိုးစားသော၊အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်လုံလောက်သော။ ရေးသားဖို့၊အသိ။ကောင်းသောနံနက်။
နှင့်အတူဂျာမန်ဘာသာစကားသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးလေ့လာမှု၏ဂျာမန်အစဉ်အလာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ ကျွန်မနာမည်ကအန်၊နှစ်ဆယ်ခုနစ်နှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး။ ငါရွှင်လန်းတက်ကြွ၊ကခုန်ကအခုန်။ ငါရေးအီးမေးလ်၊တုံ့ပြန်ဖို့လူတိုင်း။ ငါဖြစ်ဂျာမန်အတွက်၊ငါသည်အဟောင်း၊ငါအသက်ရှင်သောအတွက်အီတလီနိုင်ငံနှင့်ဂျာမန်။ ကျွန်တော်သိချင်ဂျာမန်၊ငါပြောအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်အတွက်ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးအနက်။ အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ရွှေ့ဖို့ဂျာမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ဂျာမန်နိုင်ငံသား။ ငါ့ကိုရေး၊ငါသည်သင်ကိုမြင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှု။ ဖုန္း။ မင်္ဂလာပါ။ ငါအဘို့အရှာနေပါဂျာမန်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး။ ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူဖန်တီးခြင်း၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ။ ရေးထားခေါ်။ တစ်ဦးဆက်စပ်အငြိမ်းအုပ်စုအဘို့အရှာဖွေနေနာ့ဝန်ထမ်းမှဂျာမန်သင်ယူ။ ကျွန်တော်လေ့လာနေရဖတ္စာ"လက်တွေ့သင်တန်း၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား"။ ကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းကိုယူ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်:ျပည္တြင္းတြင္ကနေတဆင့်ဂုဏ်သိက္ခာ၊ဃ။ (မော်စကို)။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သောလူတစ်ဦးဖွစျလိမျ့မညျ။ ကျနော်တို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးနှင့်အတူဂျာမန်-ဂျာမန်စကားပြော။ ငါအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်တစ်မိသားစုသို့ပြောင်းရွှေ့သည်။ အသားသည်သူခုနစ်နှစ်အရွယ်နှင့်ဘဝအသက်တာနှင့်အတူသူ၏မိခင်။ ကျွန်မကွာရှင်း၊ငါကျော် ၄၀၊ငါဂျာမန်အမြစ်များ။ အရေးအသား။ ကောင်းသောနံနက်။ ငါသိလိုဂျာမန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့။ ကြၽန္ေလေးဆယ်ငါး။ သင်အကြောင်းကိုရေးဖို့ကျွန်တော်လုံးလုံးသင့်ရဲ့နာကျင်မှုကို။ ငါအရမ်းအထီးကျန်ဆန်။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြိုဂျာမဏီကနေစတင်ဖို့တစ်မိသားစု။ ကၽြန္ုပ္၏အေၾကာင္း:ထျဲန်း(ဂျာမန်အမြစ်များအထိ)၊ကိုယ့်အပေါ်တိုက်ရိုက်ပင်လယ်နက်ခရိုင်းမီးအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အစားအသောက်နည်းပညာ၊တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသမီးကို၊ကျနော်တို့အသက်ရှင်သော။ ငါသည်ကောင်းကျိုးအတွက်စိတ်ဝင်စားအဆိုပါဂျာမန်ဘာသာစကား၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစဉ်အလာ။ ငါမျှော်လင့်တယ်အစည်းအဝေး။ ငါ့အီးမေးလ်လိပ်စာ။ အစည်းအဝေးနှင့်အတူဂျာမန်။ ငါအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်တစ်မိသားစုသို့ပြောင်းရွှေ့သည်။ ငါနှစ်ဦးတဆယ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်သား။ အပြာ-မျက်လုံးအနက်ရောင်ဆံရှင်သုံးဆယ့်သုံးနှစ်သားအရွယ်ခြောက်လက်မသာအရပ်ရှည်ရှည်၊ ခြောက်ဆယ်ကီလို။ ကျနော်တို့အခိုင်မိသားစု၊အားလုံးအထက်၊တစ်ဦးမေတ္တာရှင်ဖခင်နှင့်လင်။.
ရကရက ဒီ:အတူတကွဒါဟာဆက်သွယ်ရေး၊သို့မဟုတ်ပါကတစ်သရုပ်ပြင့်။ ကိုယ့်သင့္ေတာ္ေသာငယ္ခ်င္း၊ကစားတဲ့စကားပြောရုံအဖြစ်ရိုးရှင်း။ သင်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်၊နှင့်လေထုအမြန်ရွေ့လျားသောသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်:လာႏုိင္ပါသည္။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊စကားကနေမိနစ်ကြာဗီဒီယိုချက်တင်ကူညီပေးပါမည်:ရုံအလတ်ကမ်၊အသီးအသီးအခြားအတူ၊အစိမ်း။ အခမဲ့အဘယ်မှာဖြစ်နိုင်၊အကစားတဲ့၊သင်မြင်ကြလျှင်မဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့အလွန်သာယာသော၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတုချစ်ကြည်။ ယောက်ျားလေးများအဖို့လက်ခံတွေ့ဆုံသည့်အခါနှင့်တိုက်ရိုက်မိန်းကလေးများ၊အကြပ်အ ကျပန်း၊အသုံးပြုသူကိုပိတ်ပင်မှတ်မိတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆိုမှု၏အချစ်ကြည်ရင်းမေးခွန်းအားလုံးအချိန်။ မှာဆိုက်၏ဆယ်ဂဏန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များကျက်ကနေဒါ။ ရှိသမျှလူတစ်ဦးအချိန်:နေ့တိုင်းပိုပိုပြီးသင်တန်းသားများ၏ဗီဒီယိုချက်တင်လုပ်လုံးဝအခမဲ့အဘို့နှင့်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူ။ နှင့်အတူတစ်ဦးကမ်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုပြီးအဆင်ပြေရကတ်များအပေါ်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအလုပ်လုပ်တယ်၊မိတ်ဖက်ကျပန်းဆဲပန်ဖို့အသီးအသီးအခြား။ အလားတူဗမာ၊နှင့်သင်၏ မရှိအတားအဆီး။ သင်အတည်ပြုအီးမေးလ်ဖြင့်ဒီစကားပြောအရေးကြီးဆုံးအရာ၊အမည္မေကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏။ ဤအဆင့်တွင်လူအများရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်သူချင်းခရီးသွား၊အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းသင်ဒါကိုပိုပြီးတော့ခံစားလျှင်သင်ရုံကိုအစားထိုး။ ကိုယ့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကစားတဲ့စကားပြောမယ်အများကြီးတွေ့မြင်နိုင်သည်ဤအတန်းအစား။ စကားပြောအသံထွက်မပြောကြဘူး၊လူတစ်ဦးသင်ဖို့ပြောနေတာကြိုတင်ပြီး၊သူတို့ကြောင့်သူတို့သည်ကောင်းပါတယ်တာအချိန်ဖြုန်း။ ရိုးရှင်းမှုနှင့်အဆင်ပြေစေရန်၊သူတို့အဖို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင်ပစ္စုပ္ပန်၊ချက်တင်သို့မဟုတ်ချက်တင်ကစားတဲ့၊တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကိုအထူးကမ္ဘာအလွှာလူတိုင်း၏။ ရသိရဖို့ကောင်းတစ်သူတစ်ဦးအကြောင်းဒါကြောင့်တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏သိရန်ရနိုင်။ တစ်စုံတစ်ဦး၊သင်၏ရယ်စရာ၊ကစားတဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောအင်္ဂါခွင့်ပြု။ ကြိုးစားပြီးအသစ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးပိုကြီးနောက်ကျရင်ကထက်။ ကနေလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အဖြစ်အပျက်၊သင်တဦးတည်းကဗီဒီယိုချက်တင်အားငါပေးမည်။ ချက်တင်၊တစ်ယောက်ချင်း၊အမွတ္လူမှုရေး။ ဖိတ်ခေါ်ပိုက်ဆံ၊သို့မဟုတ်၊တနည်းကား၊မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသူကိုပဲလိုလားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရအထီးကျန်၏အျပစ္ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္။ ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအစဉ်အမြဲအထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်မကြာခဏသြဇာလွှမ်းမိုး။ ကြောင့်ခက်ခဲသည်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်အဖြစ်၎င်း၏ပင်မတန်ဖိုး၊တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးမ:သင်ဆဲတဦးဖြစ်၏၊အလျင်အမြန်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်ဆက်သွယ်နိုင်၊နှင့်အတူ၎င်း၊အင်္ဂလိပ်အတွက်၊တခါတရံတွင်အလွန်ကောင်းစွာသင်ကြိုက်တယ်။ နှင့်စကားဝှက်ကိုပြန်ရုံပေါ်တွင်ပုတ်အားဖြင့်ပျော်စရာနှင့်ခံစား၏စိတ်လှုပ်ရှားလာအသစ်စက်စက်။ အပါအဝင်ဗီဒီယိုကင္မရာအသံုးျပဳေကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောရုံသင်တို့အဘို့အ၊ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာလူတိုင်းအတွက်သင်စကားပြောမပါဘဲပါဝင်သောမည်သည့်အတားအဆီးများ:အများအားဖြင့်ကစားမှာအားဖြင့်ထူးခြားသောလူကိုဆက်ကပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကို။ မခြောက်သွေ့မဲ့၊ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ များစွာသောလူတို့အဘို့၊ဒါကြောင့်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ဝေမျှဖို့အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်၊သို့မဟုတ်နှင့်အတူတက်လာစိတ်ဝင်စားစရာအမိုက်၊ကြောင်းဘာမှမအကြောင်းကိုသင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပျင်းစရာနှင့်ဘောကြောင်အတွက်အီတလီ။ သို့မဟုတ်စာသား:အားလုံးချက်တင်၊ရှိလိမ့်မည်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ကစားတဲ့စကားပြောခန်းများနှင့်ပိုမိုမကြာသေးပေါ်သည်ထင်ရှားလံုး၊စာသားမက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်ကမ်ချတ်လိုအက္ပ္ကိုေဒါင္းပါ။ ထို့အပြင်၊ဒီအအခမဲ့အမည်မသိစကားပြောခန်းကိုထူးခြားသောကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်း။ ဆက်သွယ်ရေးအခု၊ဥပမာ၊သာဗ်သိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင်အနေဖြင့်:ဒါဟာမလိုအပ်သို့မဟုတ်သင့်လျော်မည်သူမဆိုများအတွက်။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊ဒါမှမလိုအပ်င်၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကလူကို။ ခက်ခဲတဲ့အခြေ၊သင်အကြောင်းကိုပိုပြီး၊ဒါကြောင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်များ၏ဆက်သွယ်ရေး။ ယခုတက်လက်မှတ်ထိုးအတွက်သင်တန်း။ အနည်းငယ်ပိုပြီးချက်တင်၊၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပိုပြီးလိမ့်မည်ဆက်သွယ်တဲ့လမ်း၊အများကြီးသုံးစွဲဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘို့။ ဒီဟာမနဲ့သားတော်လေးကျယ်ပြန့်လူသိများသည်:အခြေခံအားဖြင့်ပြီးသားလူသိများသည်အကြားအမြင်အခြေစိုက်နှင့်မွန်-အခြေခံပြီး၊ရုရှားကစားတဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ချက်တင်ကစားတဲ့အခန်းပေါင်းလိုအပ်ပါဘူး၊မကြားသူတို့ ။ သို့မဟုတ်ပင်အဝင်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မှာအားလုံး၊ထိုသို့လုံးဝအခမဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူစကားဝှက်ကို၊ဒီနေရာမှာသင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကုမ္ပဏီရှာတွေ့၊လူအ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်၊အခြားနိုင်ငံများ၏အသက်တာ။ အသာပြည်ထောင်စုမှကျွန်ုပ်တို့စကားပြောဆိုလျှင်၊အတူ၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်ခန့်မှန်းရန်၊ကဏ္ဍ၏။ ရှိပါတယ်ကမ္ဘာထဲမှာနေရာတိုင်းနှင့်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်၏မြင်းအားဖြင့်၊တစ်ဦးကမ်၊အများအပြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အနည်းဆုံးအချိန်၊အစာသို့မဟုတ်အသံချက်တင်၊အခြားသူတယောက်မျှမကြွင်းအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့၊အဘယ်သူမျှမသူတို့ကျိန်းသေနဲ့တူ။ ငါလိုကြပ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်မေတ္တာ၊အချိန်ဘို့အချိန်ရဲ့ခေတ်မီလူတစ်ဦးအဖို့ပျော်စရာရှိသည်နှင့်ဖြေလျော့။ ဒါကြောင့်၊ကြီးမားတဲ့အားသာချက်၊အဓိကအစာမျက်နှာပေါ်တွင်၊ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါနှင့်မြင်ပုံကိုဆွေးနွေးသည်နဲ့တစ်ခုခုမျှဝေ၊ဒါပေမယ့်သာပါပါလိမ့်မယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်၏၊မမေ့မလြော့ပါ၊ပြီးမှလှူဒါန်းမွေးဖွား၊စက္ကန့်ဗီဒီယိုအတွက်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်မိတ်ဆွေများအားလုံးမှစိတ်ဝင်စားစရာအစည်းအဝေး။ ဆုံးနဲ့အရေး၊ချက်တင်၊မိတ်ဆွေနှင့်ချစ်ခြင်း၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ကြောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုချက်တင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်ပေးသည်အနောက်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြော။ အဝေးမှဆက်သွယ်နှင့်အတူဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများ၊ရရန်အလွန်ကြီးစွာသောအကြံပေးချက်များ၊တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပင်ပထမဦးဆုံး။ အဆိုက်ရဲ့အသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်ကောင်းစွာနာကျင်မှုကို။ အထူးဖန်တီး၊နှင့်အတူအခြားလူများအတွက်ဒုတိယ။ အသုံးပြုနည်းဗီဒီယိုချက်တင်အစောပိုင်းက၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"ကြယ်သီး၊အဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဖို့စတင်စကားပြော၊ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဒီနေရာမှာတိုတောင်းတဲ့စာရင်း၏အရေးအပါဆုံး၊နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောဆောင်သောဘက်ခြမ်းတွင်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲနှင့်ပတ်သက်နေသောလူများအတွက်၊မိန်းကလေးများသည်အကြောက်၊အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအပေါ်လမ္းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုပြောပြရြယ္ကတည္း။ ကျပန်းတပါးအမျိုးသားရှာဖွေဖို့အလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များ၊ရှာလှုပ်ရှားမှု၊ကျွန်တော်တို့အားလုံးချက်တင်၊ကိုထိပုတ်ပါချက်တင်အပိုင်း၏အပျော်စရာနေရာအခါနှုတ်သီးအသီးအခြား။ ချက်တင်-အကစားတဲ့။ သို့မဟုတ်စိတ်ရင်းမှန်ပြောဆိုသောအခါ၊ နှင့်အတူလေထု၏စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြယ်တံခွန်ဗီဒီယိုစကားပြောသောအခါ၊ထောင့်မြေတစ်ထောင်။ မိန့်ခွန်းအသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ရည်ရွယ်ဂျာမန်စကားပြောပရိသတ်ကိုဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၊အပေါ်အချို့တိကျသောအကြောင်းအရာများ၊ချက်တင်ကစားတဲ့၊ဖြစ်ရပ်များ၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောချက်တင်အမညီတဲ့၊ပိုပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ယူကရိန်း၊လက်တွေ့သင်အချိန်အကြာကြီး ဆွေးနွေးရန်။ သုံးပြီးအညွှန်းမီနူးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများ၏လူကြိုက်များမှုအကစားတဲ့စကားပြောခန်း၊နှင့်တက်လာမယ့်အတူ၊စိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်၊နှင့်အစီအစဉ်၊အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်သုံးစွဲသူများ၏အရေအပေါက်၊အမည်သခင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံ(ကနေ။ ကစားတဲ့ကိုင္မ်ားအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအစဗီဒီယိုချက်တင်။ အကစားတဲ့စကားပြောခန်း၊ရှိစေခြင်းငှါချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များ၊မငြင်းနိုင်သောအားသာချက်များ။ အခမဲ့၊ဂျာမဏီနဲ့တူအတွက်။ နှင့်အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းအဆက်မပြတ်တင္ေနေ့တိုင်း။ သွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသောတစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်အစွန်အဖျား:သို့မဟုတ်အစား၊ဒီအပေါ်နည်းလမ်း၏။ တစ်ဥပဒေကြမ်းအဖြုန်း၊နှင့်သံမဏိခန့်ရရှိနိုင်မစိုက်၊ဗမာကျောင်းစာပိုဒ်တိုများထံမှသင်တို့က၊ေမးခြန္း။"စတင်":အသစ်တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ရုံအပေါ်၊၎င်း၏အဖော်။ ဆိုရင်လူတိုင်းနှင့်ယောက်ျားတွေရှိပါတယ်၊နှိပ်ပါ"စတင်နှင့်အတူအဘယ်သူကို"။ မှာကြည့်လင့်ဘယ်မှာကျနော်တို့ကျပန်းရွေးချယ်ထား အစအဦးမှာ။ ရယ်မောသာျ၊လိုအပ်သောလျှင်၊အပယ်ဖြတ်။ ဗီဒီယိုစကားပြောနေ့တိုင်း၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အသစ်သူများ မိတ်ဆွေများအားလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအမြင်များ၊ဝဘ်ကမ်များနှင့်မိုက်တွေ့နိုင်ပါသည်အားလုံးသည်ကမ္ဘာအနှံ့အသုံးပြုနေသောအချက်အတူအမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ခြင်းပုံစံများ၊အညီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတောက်ပပြီးအပျောက်အသစ်တခုစကားလုံးများကြီး။ လျှင်အသက်တာ၌အခါ၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေသင်သွားစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဆင့်ကမ်၊သုံးကစားတဲ့အခမဲ့ချက်တင်ပြောပြရန်အချို့သောလျှို့ဝှက်ချက်များကို၊ညီအစ်ကိုပဲ။။။။တစ်ကြိမ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်"ဟုတ်ကဲ့"နှင့်ပြောဆိုရန်သာ။လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်၊နှင့်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ပါသင်လိုအပ်ပါဘူး။ မည်သည့်အချိန်တွင်မရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်လုံးဝအမည်မသိ။ ဒီအွန်လိုင်းချက်တင်၊အရှည်ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အစည်းအဝေးအသစ်လူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာ၊ဘယ်လောက်စတင်ရန်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအခါမိတ်ဖက်အကြိုက်သူ့ ၊"လာမယ့်"ခလုတ်ကိုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအလွဟုတ်ကဲ့။ စိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေ၊အဓိကမောင်းနှင်အားကျွန်ုပ်တို့၏။ အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်၊ေျပာပထမဦးဆုံးနှင့်အပြုံးများအတွက်၊စကားပြော။ သင်တို့နှင့်အတူ၊ရယ်စရာနှင့်အခင္ဆံုးချက်တင်ကစားတဲ့၊အရာအားလုံးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သင် အခါဝင်းဒိုးကိုပိတ်သည့်အခါ၊သင်လိပ်စာရှာတွေ့ဖို့စိတ်ကူးမိတ်ဆွေများ၊သင်ရှိသည်အချို့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအဖို့အခွင့်အလမ်းကိုသင်၏လက်ကိုကြိုးစား၊နှင့်၊အသီးအသီးအသစ် ၊ခံစားဆက်သွယ်အွန်လိုင်းအခြားလူများနှင့်အတူ။ သုံးချက်တင်၊ပူးပေါင်းခေါင်းစဉ်"ဘဝအရှုပ်ထွေး"။ ထွန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး၊အရာသင်အကြောင်းကြားရကြပြီ၊သူတို့ကအပေါ်ထင်ရှား။ ဗမာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်လူတိုင်းသင်စာသားအတိုင်းထားခဲ့ပါ။ ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်အလိုတော်ကိုမြင်ရပြီးနောက်သင်နှိပ်အစက်အပြောက်။ အခြား ကမ်းလှမ်းဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်ရုံလိုအပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီး၊သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသင့်ရဲ့ ၊အရိုးရှင်းတဲ့အခမဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ကျက်စေဖို့အသစ်ခန့်၊သင်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်အရာကိုသူ့ကိုအကိုက်ညီဆုံး။ အဘယ်အရပ်အစီအစဉ်ကိုရွေးကောက်၊အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောပါဘူး။ ဒီမျှားကိုနှိပ်ပါအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုစကားပြောပေးစကားပြောနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ရုပ်ရှင်တွေအတွက်အဖွင့် လေ၊လျစ်လျူရှုခြား(ကျပန်းရှာရန်အတွက်)အမည်မသိကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောဗီဒီယိုချက်တင်ချက်တင်နှင့်သင်သိမှရမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ဆိုရင်နည်းလမ်းဖြင့်ငြီးငွေ့စာပေးစာယူသောကျပန်း၊၊ကျွန်တော်တွေးမိသည်ထိုနိုင်ငံများ၏အဥရောပသမဂ္ဂ၊ထိုအခါ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်။ သုံးပြီးလျှင်တစ်ကမ်-ထိုအခါ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာတွေ့လိမ့်မည်အလွယ်တကူအီးမေးလ်ဖြင့်။ နှင့်အတူတစ်မိုက်၊အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့မှာလူထုအစည်းအဝေးနှင့်နာရီတစ်နေ့လျှင်:နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်။ ဒီဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုမကအသိအမိုက်နှင့်ကမ်၊အရာအရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်မ၏ရိုက်ချက်ပေးရမည်ဘယ်မှာသင်၏စကားပြောဆိုမှုရာအရပျကိုယူ။ လုံးဝအခမဲ့များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေဗီဒီယိုချက်တင်ဒီတယောက်တည်းနဲ့အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း ၊အယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဗီဒီယိုစကားပြောသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာအသစ်မျက်စိ။ အိမ်မှာကစားတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်စကားပြောခန်းနှင့်မဖြည့်ဆည်း၊သူတို့ရဲ့မတ်ေကစားတဲ့အတွက်အခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ၊တစ်ခါတစ်ရံလာင္းအားစကားစတင်။ ရတောက်ပနှင့်မေ့နိုင်သော၊ချက်တင်အတွက်ကမ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၊သင်သည် ကျနော်တို့သေချာသောအဆက်အသွယ်အတွက်စစ်မှန်သောအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်အရှိဆုံးနှစ်လိုဖွယ်အရသာ၊များစွာသောပရိသတ်များ:အဘယ်သူသည်အ ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်၊လူတိုင်းသိပေမယ့်သင်ကလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုချက်တင်လုံးဝ၊ဒါကြောင့်သင်တန်းမလြန္ဘ။ ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်ဘဲထွက်ခွာလူသန်းပေါင်းများစွာသား၊ဘယ်လိုဂ်ာဗီဒီယိုချက်တင်အကြာပထမဦးဆုံးအဆင့်မီဗီဒီယိုချက်တင်၊ကနန်း၊ရေ၊ရှာ နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။ အတူသာယာသောစကားပြောဆိုမှုအကမ်၊ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်း။။။ဒါဟာအလုပ်မသွားလျှင်သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပိုပြီးဖွယ်ရှိနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဇက်၊နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ မလျှင်ဖွဲ့စည်း၊ထိုအခါအဘယ်သူမျှမသိရကြလိမ့်မည်များနှင့်စာနယ်ဇင်း"စတင်"ခလုတ်ကို။ လည်း၊လူများအနေဖြင့်စာရင်းပြုစုမည်မဟုတ် ။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောရှာဖွေရန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောဖို့မခိုး။ ကိုယ့်အရှေ့ကခွဲခြားမှု၏နိယာမအာမခံလိမ်လည်။ အားဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်လုံးဝအခမဲ့အာဂျင်တီးနား၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဝမ်းနည်းဖွယ် အငြင်းအဆင့်အနည်းငယ်အကွာမှသို့မဟုတ်မည်သည့်လူကြိုက်များသည့်နိုင်ငံ မကိုစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်စစ်၊သို့မဟုတ်ပင်စာသားစေလွှတ်မည်။ သင်ပြီးသားအလိုဖြည့်အတွက်နှစ်သိမ့်စကားပြောသည်။ ဂ်ာဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊နှင့်အပြောင်းအလေးပေး၏အသက်တာ၌ပေါ်လွင်သောအထိမ်းအမှတ်:စတင်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူသူတို့အားနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမသိသင့်သောအကြောင်းသင်အလွယ်တကူရှာတွေ့ချိန်ကနေလူတို့နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာ၏ဒေသအရာ၊စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်ပျော်စရာ။.
ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံးလွတ်လပ်ထိုသူတို့အထဲမှကချင်နှင့်ပျော်စရာများအတွက်။ ဒါဟာသာအလှန်ကြိုက်နှင့်ဖြစ်ကောင်းအသုံးအကျိုးစီးပွားအကြောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်အန္တရာယ်ကင်း သို့မဟုတ်ရှိမရှိနှင့်ပို။ ဤသဘောမျိုးခုနှစ်၊ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်မဟုတ်သော-သာမန်လုပ်ငန်းရှင်ဂျာမန်အတွက်ယူမှတဦးတည်း-အချိန်နှင့်တစ်ရိုးရှင်းတဲ့တယောက်ကနေအခြားအညွှန်ပြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာလိင်ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ရှာဖွေရေး၊နှင့်အလွတ်သဘောဖလှယ်မှုအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်ရာအခမဲ့လိင်ချက်တင်အခန်းပေါင်းဘယ်မှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူအခြားလိင်တူလူအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာများအတွက်အခမဲ့နှင့်လုံးဝအခမဲ့၊လိုအပ်ပဲစကားပြောခြင်း၊နှာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း။ အလိပ်စာစာအုပ်များအတွက်ရှာဖွေ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံး၏စာရင်းကိုချိတ်ဆက်လိင်တူလူများအတွက်။
သင်ပြီးသားအသုံးပြုသူတစ်ဦး? လက်လှမ်းအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုဒီမှာ။ ဘူးအပြေသေးဘူးလား။ သုံးစွဲဖို့ဤအဂၤါ၊သင်မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘာကိုသင့်ရဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာချိန်းတွေ့မှတ်တမ်းများ အသက်၊သင်အမြဲနေ့စွဲ။ သင်ပင်လျှင်လူငယ်နှင့်ပြီးသားကြပြီရက်စွဲများသွား၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှင့်အတူဤရက္မ်ားအားကစားအစည်းအဝေးလုံးဝအန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့မဆိုအနေဖြင့်ဖိ ။ ရွေးချယ်ပြီးပြည့်စုံသောစုံတွဲသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်၊ထို့နောက်သုတ်၊အိမ်ထောင်ပြုပြီးသင့်ရဲ့ဆံပင်နှင့်လက်သည်း၊သွား။ မဆိုကံနှင့်၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်တစ်ဦးညစ်ပတ်အနည်းငယ်နမ်း။ ဒါပေမယ့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းကိုမည်သူနောက်ဆုံးမှာအယူအပေါ်မှာရေတွက်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်စည်းအဝေးသည္အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ရှာရက္မ်ား(နှင့်ဝင်ငွေ)၊ယောက်ျားတွေမှ စာမ်က္ႏွာအနုပညာရှင်၊သငျသညျကြော်။ သိုနေ့စွဲညဥ့်ထွက်ရှာဖို့သင်ကြိုက်အဘယ်သို့သောအ။ ငါတို့သည်လည်းမည်သူမဆိုမပြောကြဘူး။ တိုက်ရိုက်နေ့စွဲအပေါ်ရောမမွို့တှငျသို့မဟုတ်နှာသာ။ ေရာင္းရန္အနမ်းမှာသို့မဟုတ်အလုပ်ကြိုးစားတစ်ဦးလျင်မြန်စွာရက်စွဲအဘို့အစုံလင်သော။ တစ်ချိန်ကသင်ဂိမ်းထဲမှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း၊ထိုသို့သာသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမှတ်ဉာဏ်ကြောင့်၊သင့်ကိုအစဉ်အမြဲအတွေ့အကြုံရှာဖွေဖို့ရန်မလိုဘဲ။ ဒါပေမဲ့အသွားအပြန်အချိန်အတွက်အဘယ်အရာကိုမြင်သစ်ဂိမ်းထည့်သွင်းခဲ့ကြ။
ချိန်းတွေ့ vmangame ခွင့်ပြုနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေး၊အခမဲ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ။
လုနီးပါးအခမဲ့ Mannheim ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းများနှင့်ပိုမိုလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ချစ်ချိန်းတွေ့၊လူမှုရေး၊ချစ်ကြည်ရေးနှင့်မ-ျပည္ေထာင္စုရော။ မပြန်ကဒီမှာလာကြ။ တက်လက်မှတ်ထိုး-တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်မှတ်ပုံတင်အပေါ်ဆိုက်အတွက်အသင့်ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးပရိုဖိုင်နှင့်ရက်စွဲ။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်ပြည့်စုံ၏လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်အနေမှလူတိုင်း၊ဒီတော့ဖြစ်လိုလျှင်သင်လုံးဝလုံခြုံ။ သိကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်နေရာဖြစ်ပါသည်လွယ်ကူသော။ ကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များသူတို့စတင်ရန်လိုအပ်။ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်တစ်ခုလက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်းဆိုက်၏အကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါ။ မေတ္တာသည်ပင်မှတ်ပုံတင်မပါဘဲတစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ပေါ်တွေ့မြင်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:Adelberg သာ Stuttgart၊ယင်၊Freiburg ဖက္ရွင္အ Breisgau၊Heilbronn၊Ulm၊Tubingen-အသစ်စီမံကိန်း"အဖြစ်ချိန်းတွေ့အတွက်အားလုံးမြို့"ရုရှားအတွက်နှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချက်တင်နှင့်ၾကာင္း၊သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အများအပြားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းလုပ်အကျွမ်းများအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အေးမြမှုအရာအပေါင်းတို့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ။ အချို့သောသူတို့၏ဖြုန်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်အွန်လိုင်းအခြားသူများသင္းကြောင်းတိုးချဲ့သို့လက်တွေ့ဘဝနှင့်နေဆဲအခြားသူများချိန်းတွေ့။ ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ရေတွက်၏အရေအတွက်ညနေခင်းသို့မဟုတ်အမွတ္္မွႀကီးမွဴးက်င္း ဖြုန်းသောသူကိုမှန်မှန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့၏အချိန်လေးအခမ်းအနားနှင့် ၍သူတို့အကြောင်းသူတို့အပေါ်တိုက်ရိုက်လိုင်းချက်တင်-ဆင်။ ပြီးတာနဲ့အပေါ်အွန်လိုင်းအခမဲ့ချက်တင်၊သင်သည်လည်းသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်အားေလုပ်အတွေ့အကြုံအများဆုံးသာယာသောနှင့်သင့်လျော်၏အရသာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းအိမ်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆယ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လေးဆယ်ငါးဆယ်ပဲရစ် عینک آفتابی زنانه ليون မြောက်အရှေ့အနောက်တောင်-အရှေ့တောင်ဘက်-အနောက်ဘက်အလယ်နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့စကားပြောလည်းအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ်မိုဘိုင်းဗားရှင်းအပေါ်တစ်ဦးတက်ဘလက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်း။ လာ၊အလုံအလောက်အ -၊ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးယခုငါတို့အခမဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သုံးစွဲဖို့ မမေ့နိုင်သောအချိန်လေး။
အတိုင်းလိုက်နာဘလော့ဂ်နှင့်မွမ်းရစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်အတူစာပိုဒ္တိုမ်ားဂျာမန်အတွက်အခမဲ့များအတွက်၊ရယူဖို့အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း။ နှင့်အတူဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေနဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအသက်တာအတွက်ဂျာမ။ သငျသညျကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းပါး၊လူမှု။ ကွန်ယက်(ခလုတ်)တစ်ယောက်ယောက်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သော။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်ကြိုတင်မဲအတွက်၊ချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူများ။ သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ဤအစဉ်ဆက်မပြတ်အရေအတွက်ကို၏ဧည့်သည်များအပေါ်အမျိုးမျိုးသောလူမှုကွန်ယက်၏ဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းလေ့လာမှုများ။ သူတို့ကိုအဆိုအရ၊ ရေးသားပြုစုအတွက်မြောက်မြားစွာလူမှုရေးကွန်ရက်၊ပန်းကိုစုဝေးစေတော်မူပြီတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတပ်မတော်၏ပရိသတ်များအဘို့၊အဘယ်သူကိုသည်၎င်းအင်္ဂလိပ်ဧည့်သည်များမှာ။ စကားမစပ်၊အခြားလူမှုကွန်ယက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုပြီးဘောလုံးပရိသတ်များအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ဒီပေါ်တယ်ရှိကြောင်းဦးဆောင်ဖို့အတွက်သိသိသာသာတိုးများသန်းပေါင်းများစွာကြိမ်လာသွား။ အသုံးလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းပြည်နယ်ရှိကြောင်းအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အပြုအမူ။ အားလုံးအသုံးပြုသူများအလွန်အမင်းပြုပြင်နှင့်သာရေးသားနိုငျသအဘယ်သို့သောအကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်နှင့်အောက်တွင်၎င်းတို့၏အမည်။ သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်-ဒါဟာမသာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ပါ။ အချို့သောဂျာမန်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်စာချုပ်များ၊ဒြပ်စင်တစ်ခု၏လူမှုမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်န်ထမ်းတစ်ဦးရှိသည်သောသူ နှင့်တွစ်တာအကောင့်။ အကြွင်းမဲ့ကေနခ်စ္သူျ-၊သြယ္ဝိုက္နှင့်ဝေ၏ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့်ကော်ပိုရိတ်အထုတ်ကုန်များ။ အများအပြားရှိပါတယ်အလားတူဆိုဒ်များအတွက်ဂျာမေ တိုင်းအရသာသည်။ အသီးအသီးပလက်ဖောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့တိကျသောအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲသူများကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်အောင်အလေးအနက်လူတွေဤကဲ့သို့သောအမျိုးအစား၏နေရာချထား။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အများဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ဆိုက်သည္အခမဲ့ျဖစ္သည္။ နှစ်ဦးစလုံး-ဂျာမန်စကားပြောလှယ်ပြီးကြသည်သောသူတို့အတွက်ဂျာမန်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်ဤဆိုဒ်များပေါ်မှာ။ ရှိမှတ်ပုံတင်နိုင်မည့်နေရာအဖြစ်တဆယ်ခြောက်ယောက်နှစ်အရွယ်။ ကြီးမားသောလူကြိုက်များ၏၊အများဖြစ်သောမှတ်ပုံတင်များအပြားလူဦးရေသန်း။ ထိုအခါ၊ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှု၊သူတို့ကမေးခွန်းတွေမေးနှင့်ရွေးချယ်မိတ်ဖက်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်ဖက်။ ယခင်ပို့စ်အခမဲ့သူများအဖြစ်အီးမေးလ်များလက်ခံရရှိ၊ဒါပေမယ့်တုံ့ပြန်ဖို့သူတို့ရဲ့ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့ငွေပမာဏ။ သွားရန်ဤအမျိုးအဆိုဒ်များ၊နှင့်အလျှင်သင်ကြိုက်တယ်ဆောင်းပါးမျှဝေအတွက်လူမှုအပိုင်း။ ကွန်ယက်(ခလုတ်)တစ်ယောက်ယောက်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သော။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်ကြိုတင်မဲအတွက်သင်၊ချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူများ။
ငါ့ရုပ်သံလိုင်း၊ဒီေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူ။ ရယူဖို့။ အဘယ်ကြောင့်ဒီတော့ခက်ဖို့အတွက်ဂျာမ။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအဆိုပါရုပ်သံလိုင်း။ ရ။ ဂျာမ။ ဆက်ဆံရေး။ စိတ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဘဏ္ဍာရေး။ လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍ၏တစ်ဦးနုပျိုလူတစ်ဦး။ ဂျာမ။ ဂျာမန်မိန်းကလေး၊ဂျာမန်မိန်းကလေး။ စိတ်ရမဘယ်လိုသို့အမှိုက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရသောအခါအပြုအမူ၊ဂရုစိုက်။ အစည်းအဝေးတွင်ဂျာမနီနိုင်ငံအပေါ် ။ ရှာသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အပေါ် မခ်င္း။။။။
တဖန်ဗီဒီယိုချက်တင်-အကစားတဲ့၊ဤအချိန်၌ဂျာမန်။ ဆက်သွယ်ရေးမှာအဓိကဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အများအပြား များမှာဂျာမဏီကနေ၊ကာဇက်စတန်နှင့်အခြားထားပါ၏ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ လူအတော်များများရေးသားနိုင်ပြီးပြော။ အဖြစ်အားလုံးအတွက်အခြားကစားတဲ့ချက်တင်။ ဖော်နှင့်နာက္လဆက်လက်ရွေးချယ်တဲ့အခါ။ ပင်လယ်ထဲသို့ငုပ်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်၊အဘယ်သူမျှမအမည်သို့မဟုတ်စကားဝှက်။ နှိပ်ပါ"စတင်"ကြယ်သီး၊နှင့်ဆာဗာကိုရွေးမည်အားဖြင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်လိုလို။ ဂျာမနီက-ဂျာမနီက၊
မင်္ဂလာပါ ။ ငါတွေ့သောငါ၏ဒုတိယခင်ပွန်းအခါငါးဆယ်နှင့်တွေ့ဆုံသူ့ကိုအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အခမဲ့ဆိုဒ်များ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မအားဖြင့်ပေါင်းပင်မှအများကြီးရှုပ်အပေါ်ရှိ။ ကောင်းတစ်ဦးအများစုအမျိုးသားမဟုတ်သူအများအရည်အသွေးနှင့်ရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်အရာတစ်ခုခုအတွက်၊အလေးအနက်မည်မဟုတ်များအတွက်ပေးဆောင်ဒါကြောင့်လဲကျနော်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအကြံပြုပါသည်သင်ကြိုးစားနေအပေးဆောင်။ ကျွန်မအထင်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါခေါ်သဟဇာတသို့မဟုတ်ပွဲစဉ်စက်ည့္ပါ။ သူတို့ကပိုပြီးကျယ်ပြန့်မေးခွန်းတွေနှင့်အတူအကြောင်းတော့သူတို့ပေးတဲ့စာရင်းဘယ်သူ့ဟန်ပွဲစဉ်အားဖြင့်ဘယ်လိုသင်ဖြေဆိုပါ။ သွားလျှင်ဤနည်းလမ်းနှင့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်လမ်းတစ်လျှောက်၊သင်အမြဲရေး၊ငါသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အတူထွက်ကူညီခဲ့။ သာအခြားအရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်ရှာဖို့အနီးတစ်ဦးတစ်စုအစုံတက်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ဗစ်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများ။ ရှိများ၏တဦးတည်းအတွက်သူတို့သည်ငါ့ဧရိယာ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာဖွင့်ထားတူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်စာရင်းဒါကြောင့်သင်နိုင် သူသွားခဲ့ပြီးအမှုထွက်ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေအခါ၊သင်သွားသည်။ သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်အလွန်အကျွံကြီးကဲ့သို့အမဲလိုက်အဘို့တစ်ဦးဆေးထိုးအပ်အတွက်ကောက်ရိုး။ အားလုံးငါပြောခဲ့ကြောင်းကိုယ်တိုင်အတွက်ပရိုဖိုင်နှင့်အဘယ်သို့ငါအတွက်ရှာဖွေနေကောင်လေး၊ငါသည်အခြစ်ရာကနေစတင်နှင့်အတူအသီးအသီးသောသူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ထံသို့ချဉ်းကပ်ခင္ဗ်ာ။ ငါလုပ်ခဲ့ကြရာတွင်အတွေ့အကြုံဒီမှာအချိန်သွားတယ်။ အလေးလမ်းလျှောက်တက်ဖို့ကျွန်မကိုမေးငါ့နာမနှင့်စေ့စပ်၌ငါ့ကိုစကားပြော။ သူပြောခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်နှင့်အကြှနျုပျကိုမေးလျှင်အဘယ်မှာငါမသွားဖို့အသင်းတော်၊ယူဆသည်တချို့ထူးဆန်းသောအကြောင်းပြချက်လူအပေါင်းတို့သည်တက်ရောက်ရမည်ဘုရား ။ ဤအချက်မှာငါမရှိတော့ပါတက်ရောက်တဲ့အသင်းတော်၊ငါမူကားအကျင့်ကိုကျင့်ပါ၏အလွန်ကြီးစွာသောအဖြစ်ဝေးငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အတူကျွန်မဆက်ဆံရေးကဘုရားသခင်နှင့်အတူ။ ဒီတော့၊ကျွန်တော်ပြောကျွန်မမတက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာမဆို၊သူကြည့်ထိတ်လန့်၊တက်ကျောထောက်နောက်ခံအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများနှင့်အရာတစ်ခုခုနှင့်တူ၊"သင်အပြန်အပြတ်တွန်း။ ကနေကွယ်ပျောက်နေဖို့အကြှနျုပျကိုနှင့်အဆက်မကျင့်ချဉ်းကပ်မှုခင္ဗ်ာ။"ငါအကိုက်အတွင်းငါ၏အပါးမှစောင့်ရှောက်ရယ်မောသံကျယ်ထွက်သို့မဟုတ်တောင်ပြုံးကြောင့်မေ့လျော့သောသူတယောက်မှချဉ်းကပ်မှု ငါ့ကို၊မပတ်လည်အခြားလမ်း။
အရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်သောစကားကိုပြောကြတဲ့အစည်းအဝေးမှာ၊တက်ဆွဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အစီအစဉ်၊ဒါပေမယ့်မ၊စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရာရာကိုမေ့လျော့၊တစ်ဦးရှက်စရာအခြေအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငြိမ်သက်သည်အဓိကရန်သူ၊သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတော့၊အဆိုပါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ထိုမေးခွန်း၏အဖြေမည်သို့ကျော်လွှားရန်ကြောက်ရသိတဲ့မိန်းကလေးဟာမကြာခဏရှာဖွေ။ မြင်ယောင်ကြည့်သင်ရှည်လျားလူသိများစုံတွဲတစ်တွဲသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ။ သိ၊သင်တို့ညီထိန်းညှိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းမရှိလျှင်သင့်ကိုယ်ရာအားလုံးကောင်းစွာဝင်၊စတင်ကစားအားကစား။ အကြောင်းအကျိုးရလဒ်၊အရေးယူ။
နှေးသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း၊ခပ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံသည်သူ၏။။။။။ အစဉ်မပြတ်ငါလိုခငျြအချစ်နှင့်ပျော်မွေ့။ အခါသင်သည်နှစ်ခုစလုံးပျော်ရွှင်စိတ်ချယုံကြည်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်၊ဒါကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်း။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသည်မိန်းကလေးအတွက်မူရင်းဝါကျ၏ရိုက္ႏ။ ဒီအခိုက်မှာလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်ဖန်တီးမှု၊အသက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မူရင်းရိုက္ႏအဆိုပြု? အဆိုပါလမ်းကြား၊သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုလုံးဝအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးစုစည်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်အတူနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားထိုင္ခံုေ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ရှမ်၊ပန်းပွင့်နှင့်လက်စွပ်-ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ကောင်းရဲ့၊ဒါပေမယ့်ပြီးသား။ အံ့အားသင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရေးကြီးသည်။ ဒီရွေးဖတ်သတင်းစာသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းနေ့တိုင်း။ ထိုလုလင်သည်လူတစ်ဦး၏စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်ကြိုတင်အရာအားလုံးကို-ဂန္တုအယ်ဒီတာအဖွဲ့ရုံးနှင့်ဝယ်ယူကြော်ငြာအာကာသ။ စာမျက်နှာတစ်ခု၏အမဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်၊နေရာအရပ်ကို၏ဓာတ်ပုံတစ်အချစ်တဦးတည်းနှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကို။ သေချာအောင်သင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံဒါကြောင့်သတို့သမီးကိုကြိုက်ပါတယ်။ ၿရုပ်သံမိန်းကလေး? ကြီးမြတ်။ ဝယ်တစ်ဦးအစွန်းရုပ်သံလိုင်းပေါ်တွင်ကြော်ငြာနေရာ။ အထူးပြုအေဂျင်စီ(မီဒီယာသို့မဟုတ်ကြော်ငြာ)။ လိုအပ်သောခဲ့သောဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက်နေရာကောင်း၊အမည်အားဖြင့်ထိုသတို့သားတစ်ဦး ။ တစ်ခုနှင့်အတူစေ့စပ်လက်စွပ်၊လက်တော်၌အမျိုးအစားရှိသည်သင့်စကားများပြောဖို့မေတ္တာအကြောင်းမှာအဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်စေသူမသည်သူ့ကိုလက်ထပ်။ ငါထွက်ရှာကြိုတင်မဲအတွက်အခါသင့်တီဗီရုပ်ရှင်ကစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မိန်းကလေးသင့်တစ်ဦးတည်းသာသူမအခန်း၊အလွန်အကြော့နှင့်အတူပန်းစည်းပန်းပွင့်များ၏အဆုံးမှာထည့်သွင်းရန်နှင့်လက်စွပ်လက်ဆောင်အဖြစ်။ ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် အလုပ်ကြိုးစားဖို့ဒီစိတ်ကူး။ အခမဲ့မြင်းကြည့်ဒီလိုနဲ့ချစ်သူအပေါ်သွားလိမ့်မည်တဲ့ဘဏ္ဍာသည်အမဲလိုက်ခြင်း။ အောင်မိုး၊အဖြေများ၏အမည်များရောင်းဆိုင်များ၊ကဖေးများ၊ရုပ်ရှင်များနှင့်အဓိကအချက်-အမြဲမေး။ ဤအရပ်တွင်၊သငျသညျရှေးခယျြဖို့လိုအပ်နှင်းပြီး၊အကွက်၏ချောကလက်၊ရှမ်ပိန်နှင့်အပုန်းအောင်း။ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူညီနှင့်အတူပေးသွင်းသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ပြည်တွင်းတုိက္ဆုိင္မႈရုံး၌ကြိုတင်မဲ။ မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လျှောက်လွှာရက်စွဲနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ မြို့ကြီးများအတွက်၊ဒီနည်းလမ်းကိုမခက်ခဲသည်အကောင်အထည်ဖော်ဆိုရင်၊သင်ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းများခွင့်ပြုပါ။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ငှားရမ်းထားသောလေယာဉ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပိုစတာ။ (အမည်)၊သင်သည်ငါ့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားတော်မူမည်? ပျံသန်း။ အဖြစ်တစ်ဦးကမိန်းကလေး၊တစ်မူရင်းအဆိုပြုချက်ကို၊ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းနှင့်ထိရောက်မှုရှိ? ဝယ်တင့်တယ်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့စိန်ကြိုတင်မဲအတွက်။ နေစဉ်သင့်ရဲ့ချစ်သူအိပ်ပျော်နေသည်၊ပြီးတော့လက်ညှိုးအပေါ်။ သူသည်နှိုးသောအခါ၊သူသည္အံ့သြနှင့်။ သေချာအောင်သောအခြယ်နှင့်ဝတ်ဆင်၊သူမ၏သိစေအတွက်ကြိုတင်အကြောင်း သင်အစီအစဉ်ကိုသွားရောက်ရန်သင့်ဆွေမျိုးသားချင်းကာလအတွင်းအားလပ်ရက်။ နှစ်ဦးစလုံးရဲအရာရှိသဘောတူ။ သင်ဝင်နိုင်ပါသည်အိမ်နှင့်ပြောသောတရားစွဲဆိုရမည်သက်သေပြသောအလှဆုံးနှင့်အချစ်-တစ်ဦးထူးဆန်းကောနှင့်လက်မှတ်။ မှာဤဆောင်းပါး၏အဆုံး၊ထိုအရပ်၌ဖြစ်သင့်တဲ့မေးခွန်းပါ။ (နာမည်၏အသတို့သမီး)၊လက္ခံနိုင်ငံသားအားလက်ထပ်။ (နာမည်၏အသတို့သမီး)? ဒါ့အပြင်၊သင်္ဘောသား(မတူတဲ့ရဲကား၊ဒါပေမဲ့နှင့်အတူအပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ကောင်းတစ်ခုကား)အတုိက္ဆုိင္မႈရံုးလျှောက်လွှာကိုဖန်ဆင်းလိမ့်မည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ချင်လျှင်သင်အတည်ပြုချက်ရရန်သင်၏ဖုန်းအရေအတွက်၊သင်သုံးနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အလယ်ခေတ်ပက်(ပက်)၊အသက်ရှင်သောချက်တင်အခန်းပေါင်း၊နှင့်သာ။ သူလည်းဖွဲ့စည်းကောင်းတစ်ဦးကွန်ယက်များအတွက်အမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ပက်၊ဒါကြောင့်လုံးဝအခမဲ့အဘို့။ ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့အတုအကောင့်ကိုအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာ။ ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်အရေအတွက်ကိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထိုဆိုဒ်များအပေါ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာသို့လုံးဝအခမဲ့။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သင်သည်လက်ျာနေရာ၌ရှိကြ၏။
ငါ့ရုပ်သံလိုင်း၊ဒီေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီတော့ခက်ဖို့အတွက်ဂျာမ? ဝန္ေဆာင္မႈကိုအဆိုပါရုပ်သံလိုင်း၊ခင္ဗ်ာ။ အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူ။ ရယူဖို့။ ဂျာမ။ ဂျာမန်မိန်းကလေး၊ဂျာမန်မိန်းကလေး။ စိတ်ရမဘယ်လိုသို့အမှိုက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရသောအခါအပြုအမူ၊ဂရုစိုက်။ ဂျာမ။ ဆက်ဆံရေး။ စိတ်။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဘဏ္ဍာရေး။ လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍ၏တစ်ဦးနုပျိုလူတစ်ဦး။ အစည်းအဝေးတွင်ဂျာမနီနိုင်ငံအပေါ် ။ ရှာသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အပေါ် မခ်င္း။။။။ ။ စာနယ်ဇင်းဆိုင်အကြီးကြီးမားမားဝံ၊ဇိမ်ခံဝံသာ ။ အားလုံးဝံ၏အထံတော်၌ ။ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံကနေအမန်ကမ္ဘာအဝှမ်း၊ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့နှင့်အစဉ်အမြဲ။ အသိပညာ၏အင်တာနက်နှင့်အတူ။
Gesels arabiese Magreb, 'n gratis Vind die grootste chat arabiese Magreb
ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ အခြားရွေးချယ်စရာ ရကျွမ်းအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦး အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ ချက်တင်ကစားတဲ့အနှစ် အွန်လိုင်းချက်တင်အခမဲ့အွန်လိုင်းကစားတဲ့အခမဲ့ ဗီဒီယိုစကားပြောဆှ